Isiphepho uHagibis: izici, ukwakheka nobungozi | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Siyazi ukuthi izivunguvungu zasezindaweni ezishisayo zingaqina ngokushesha. Eziningi zazo zinezigaba ezi-5 noma ezifanayo. Lapho isiphepho esishisayo sifinyelela kulezi zigaba saziwa ngegama leziphepho noma iziphepho. Eziningi zazo zikhombisa iso elincane, elichazwe kahle elicwebezelayo elibonakala kakhulu, ikakhulukazi ezithombeni zesathelayithi neze-radar. Imvamisa kuyizimpawu ezimaka amandla esishingishane esishisayo. Namuhla sizokhuluma ngakho Isiphepho uHagibis, ngoba wayekhetheke ngokweqiniso ngeso lakhe nangokuqeqeshwa.
Kulesi sihloko sizokutshela konke odinga ukukwazi mayelana neTyphoon Hagibis, izici zayo nokwakheka kwayo.
2 Ukuqina okukhulu kweSiphepho uHagibis
3 ISiphepho Esikhulu uHagibis
Uma singabhekiseli kwiziphepho neziphepho, lokhu empeleni kunezingxenye ezintathu: iso, udonga lwamehlo namabhande emvula. Uma sikhuluma ngeso lesiphepho, sikhuluma maphakathi nesiphepho esishisayo lapho uhlelo lonke luphenduka khona. Ngokwesilinganiso, iso lesiphepho imvamisa cishe lingamakhilomitha angama-30-70 ububanzi. Kwezinye izimo ingafinyelela kububanzi obukhulu, yize kungeyona ejwayelekile kakhulu. Kuphela lezo ziphepho ezinkulu ezishisayo ezikwenzayo. Ngezinye izikhathi, singaba neso elincishiswe laba ngobubanzi obuncane futhi obumbene. Isibonelo, iTyphoon Carmen kumele ibe neso lamakhilomitha angama-370, okuyilona elikhulu kunawo wonke emlandweni, kuyilapho iSiphepho uWilma sasineso elilodwa kuphela lamakhilomitha angu-3.7.
Ezinye izivunguvungu neziphepho ezishisayo zikhiqiza lokho okubizwa ngokuthi iso lokuqasha noma iso eliqashisayo lekhanda. Kwenzeka lapho iso lesiphepho esishisayo lincane kakhulu kunokujwayelekile. Yilokhu okwenzeka eTyphoon Hagibis ngo-2019. Iso elincane lenza isiphepho sibe namandla kakhulu njengoba isiphepho esizungeze iso siphenduka ngokushesha okukhulu. Iziphepho ezinkulu ezishisayo ezineso eliqashisayo zivame ukudala ukuguquguquka okuqinile ngamandla amakhulu ngenxa yemimoya yazo ehambisanayo.
Phakathi kwezici zeTyphoon Hagibis sithola ubukhulu bayo be-mesoscale. Lokhu kusho ukuthi kuyisiphepho okunzima ukusibikezela ngokuya ngomzila namandla wemoya. Esinye isici sesici seTyphoon Hagibis, ngaphezu kweso laso lesiphepho, udonga lwamehlo namabhendi emvula amele zonke izingxenye ezibalulekile ezivunguvungwini. Ekugcineni, izibopho zemvula yilawo mafu akha izivunguvungu futhi ahamba ezungeza udonga lweso. Imvamisa zifinyelela kumakhulu amakhilomitha ubude futhi zincike kakhulu kubukhulu besiphepho sisonke. Amabhendi ajikeleza ngokungafani newashi njalo lapho siseNyakatho Nenkabazwe futhi nawo athanda ukuba nemimoya enamandla amakhulu.
Ukuqina okukhulu kweSiphepho uHagibis
Elinye lamacala akhetheke kakhulu emlandweni selokhu kwaqalwa iziphepho neziphepho okurekhodiwe yiTyphoon Hagibis. Kuyisiphepho esikhulu esadlula enyakatho yeMariana Islands esisePacific Ocean ngo-Okthoba 7, 2019. Sadlula kulezi ziqhingi njenge isiphepho sesigaba 5 esishisayo esihambisana nemimoya enamandla kakhulu yoku-oda kwamakhilomitha angama-260 ngehora.
Okugqame kakhulu ngalesi siphepho izinga lalo lokuqina ngokuzumayo. Futhi ukuthi ibinezinga lokuqina okutholwe yiziphepho ezimbalwa. Kwenzeke emahoreni angama-24 nje kuphela ukuthi kube nemimoya ka-96 km / h ukuze kube nemimoya engu-260 km / h. Ukwanda kwalokhu kwejubane emimoyeni ephezulu enamandla wuhlobo lokungajwayelekile futhi olusheshayo lokuqina.
Kuze kube manje, i-Division of Hurricane Research ka-NOAA ibala isiphepho esisodwa kuphela ePacific Northwest esenze kanjalo: iSuppon Forrest yango-1983. Namuhla, kusabhekwa njengesiphepho esinamandla kunazo zonke emhlabeni. Okugqama kakhulu ngalobukhulu obukhulu kodwa iso elincane elizungeza phakathi nendawo futhi elizungeze iso elikhudlwana kube sengathi libhajwe ngaphakathi. Njengoba isikhathi sihamba, ububanzi beso lesiphepho balinganisa amamayela ama-5 nautical, ngenkathi iso lesibili lalibamba.
Iso lesiphepho lakha indawo yesiphepho ukuthi isilinganiso asitholi ukuba sikhulu kakhulu, futhi sibizwa ngeso lekhanda. Ezinsukwini ezimbalwa ngemuva kokwakhiwa kwayo, yahlangana nesiqhingi esingahlalwa muntu sase-Anatahan yasuka eMicronesia. Ibuthakathaka njengoba ihambela enyakatho, futhi cishe ngesonto kamuva yaphenduka isiphepho seSigaba 1-2 lapho ifika eJapan. Igama elithi Hagibis lisho isivinini ngesiTagalog, yingakho igama laso.
ISiphepho Esikhulu uHagibis
Kuthathwe njengomcimbi omubi kunayo yonke emhlabeni ngoba emahoreni ambalwa wasuka ekubeni yisiphepho esilula kakhulu sasezindaweni ezishisayo waba yisiphepho sesigaba 5. Kuyinguquko eshesha kunazo zonke ezake zaba khona, futhi enye yezinamandla kakhulu ngenxa yokuqina kwayo . Ngokubala ekhanda lokuqasha wasenza isiphepho esiyingozi ngempela.
Ukwakheka kwayo, njengezinye izivunguvungu, kwenzeka maphakathi nolwandle. Siyazi ukuthi ngenxa yokwehla kwengcindezi, umoya uvame ukugcwalisa isikhala esishiywe ukwehla kwengcindezi. Lapho isiphepho singena olwandle futhi sifinyelela ezwekazini, asisenayo indlela yokuzondla nokuningi, ngakho siphelelwa amandla njengoba singena. Isiphepho esikhulu iForrest sango-1983, futhi yize sasinejubane elifanayo lokwakheka, sasinamandla amancane ngenxa yokungabi ne-pin-eye efanayo.
Lolu shintsho lube nokuningi okuphathelene nezici zalo ezingavamile. Izithombe zesathelayithi ezitholakele zikhombise ukuthi zineso elincane kakhulu ngaphakathi kwelikhulu. Zombili zahlanganiswa zakha iso elikhudlwana futhi zandisa amandla azo. Njengomthetho ojwayelekile, zonke izivunguvungu zineso elinobubanzi obuxhomeke emandleni elinawo. Uma incane iyingozi kakhulu.
Ngiyethemba ukuthi ngalolu lwazi ungafunda kabanzi ngeTyphoon Hagibis nezici zayo.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Izimo zezulu » Iziphepho » Isiphepho uHagibis
AmaGulf of bengal
I-Biography nokuxhashazwa kukaSchrödinger